गाउँ छिर्न थाले चिनियाँ ह्याकर, चितवनबाट दुई जना पक्राउ – Insurance Khabar
गाउँ छिर्न थाले चिनियाँ ह्याकर, चितवनबाट दुई जना पक्राउ
प्रकाशित मिति : १४ पुष २०७६, सोमबार १०:४०
काठमाडौं । नेपालका १८ वटा बैंकका एटिएम कार्डबाट जति पनि पैसा निकाल्न मिल्ने गरी फ्रि बनाएर बैंकहरुको सिष्टम ह्याक गरेको धेरै भएको छैन । तर, अझै पनि चिनियाँ नागरिकहरु नेपालमा बसेर साईबर आक्रमणको योजना बनाउदै गरेको खुलासा भएको छ ।
चिनियाँहरुको अवाञ्छित गतिविधि बढ्दा नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा भने साईबर आक्रमणको जोखिम बढ्दै गएको छ । चिनियाँहरु राजधानी काठमाडौंमा मात्रै नभएर गाउँ गाउँमा पुगेर साईबर आक्रमणको योजना बनाउन बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र झनै जोखिममा बढेको हो । काठमाडौंमा प्रहरी अप्रेशन तीव्र बनेपछि चिनियाँ ह्याकरहरु चितवन पुगेर आफ्ना गतिविधि सञ्चालन गर्न थालेका छन् ।
सो क्रममा २ चिनियाँ नागरिक पक्राउ परेका छन् । काठमाडौंको मनमैजु, महाराजगन्ज र बूढानीलकण्ठबाट १२२ चिनियाँ नागरिक पक्राउ परेपछि उनीहरुको कनेक्सन खोज्ने क्रममा चितवनसम्म पुगेको हो । चितवनमा ३० हजार भाडामा दिइरहेको घरका लागि मासिक २ लाखभन्दा बढि भाडा दिने गरी सम्झौता गरी घरभित्र शंकास्पद गतिविधिको आशंकमा प्रहरीले पक्राउ गरेको हो ।
ग्लोबल आइएमई समुन्नत योजना–१ को कति कायम भयो न्याभ?
प्रिमियर इन्स्योरेन्सको स्वामित्वमा रहेको नागरिक लगानी कोषको शेयरमा आवेदन दिने आज अन्तिम दिन
स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकद्धारा लाभांश घोषणा
नेशनल माइक्रोफाइनान्सको लिलामी शेयर बोलपत्र कात्तिक १६ गते सार्वजनिक गरिंदै
आज कति छ सुनको भाउ?
सानिमा लाईफले ब्यतित बीमालेख नविकरण गर्दा शतप्रतिशत जरिवाना छुट दिने